ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ် အမူအကျင့် (၂၀) – PoPinVdo
ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ် အမူအကျင့် (၂၀)
March 7, 2018 March 7, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ကျန်းမာ​ရေး / ဟာသ / အချစ်​+ရသNo Comment on ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ် အမူအကျင့် (၂၀)
ယောက်ျားလေးတွေကို Forever Baby တွေလို့ပြောကြတယ်။ အသက်သာကြီးသွားတယ် ကလေး စိတ်မပျောက်သလို၊ အပြုအမူတွေကလည်း ကလေးဆန်ကြမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို ကလေး စိတ်မပျောက်တဲ့နေရာမှာ ကလေးတွေလို ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နေတဲ့နေရာမှာလည်း သူမတူအောင်ပါပဲ။ ဘယ်လောက်အသန့်ကြိုက်ပါတယ်ပြောပြော ဒီအကျင့်တွေကမကောင်းဘူးဆိုတာသိလို့ မလုပ်ရင် သာနေမယ် ညစ်တီးညစ်ပတ်နေတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေတိုင်း မလုပ်ဖူးတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ တကယ်လို့ ဒီဆောင်းပါးဖတ်နေတဲ့သူက မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အတော်လေးရွံ့ရှာမိ မှာဖြစ်သလို ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ ဒီထဲမှာမပါသေးတဲ့ အချက်တွေကိုပါ ထပ်ဖြည့်ချင်ဖြည့်သွား ကြမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ကဲ ဘယ်လို ညစ်တီးညစ်ပတ်အပြုအမူတွေလဲဆိုတာ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
(၁)အိမ်သာထဲထိ ရှူရှူးသွားမပေါက်ဘဲ ရေချိုးခန်ထဲမှာတင်ပေါက်ခြင်း
(၂)လက်သည်းကိုပါးစပ်နဲ့ကိုက်ခြင်း၊ ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ပြီး လက်သည်းညှိခြင်း
(၄)ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဝတ်လို့ရမရ နှာခေါင်းတရှုံ့ရှုံ့နဲ့အနံ့ခံကြည့်ခြင်း
(၅)ရိတ်ထားပြီးသား နှုတ်ခမ်းမွေး၊ မုတ်ဆိတ်မွေးအတိုအစတွေကိုရေဆေးချရမှာပျင်းခြင်း
(၆)မုတ်ဆိတ်မွေးမှာကပ်နေတဲ့ ဗောက်တို့ဖုန်မှုန့်တို့မကျကျအောင် မကြာခဏကုတ်ချခြင်း
(၇)အိပ်ခန်းထဲအနှံ့ အဝတ်ပုံ မပြည့်မချင်း မရှင်းခြင်း၊ ခြေအိတ်ကြိုက်ခြင်း (ဘယ်လောက်နံနံလျှော် ဖို့မေ့ခြင်း)
(၈)လေလည်ပြီး အနံ့ကို လိုလိုလားလားရှူကြည့်ခြင်း
(၁၀)လမ်းသွားရင်း လူမရှိဘူးဆိုရင် အသံခပ်ပြင်းပြင်းနှင့်လေလည်ခြင်း
(၁၁)ဓာတ်လှေကားထဲမှာလေလည်ပြီး ဘယ်သူမှမလာအောင် ဆုတောင်းတတ်ခြင်း
(၁၂)နှပ်ချေးညှစ်ပြီးရင် အကျီ င်္လက်နှင့်အလွယ်တကူသုတ်ခြင်း
(၁၃)ရေချိုးဖို့လိုမလို ချိုင်းကို နမ်းကြည့်ခြင်း
(၁၄)ရေချိုးရမှာပျင်းခြင်း၊ ရေမချိုးဘဲ အနံ့အသက်ပျောက်ဆေး(ရေမွှေး၊ ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်ဆေးသာသုံးခြင်း)
(၁၆)ခန္ဓာကိုယ်က ချွေးနံ့ပြင်းပြင်းထွက်နေရင်တောင် မနံဘူးဟုထင်ခြင်း
(၁၇)လက်ဆေးရမှာပျင်းခြင်း၊ တစ်ခုခုကိုင်ပြီးတိုင်း ဆေးလေ့ဆေးထမရှိခြင်း
(၁၈)နှာခေါင်းကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်နှိုက်ခြင်း၊ နှပ်ချေးကိုအရောင်၊ အနံ့ခွဲခြားလေ့ရှိခြင်း
(၁၉)အိမ်သာသွားရမှာပျင်းပြီး ရေသန့်ဗူးတဲ့ ဆီးသွားခြင်း၊ ဆီးသွားပြီးတိုင်း ရေသန့်ဗူးကိုလွှင့်ပစ်ဖို့မေ့ခြင်း
(၂၀) ယောက်ျားပီသကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ အိမ်သာခွက်ကိုကျော်ပြီး ဆီးသွားခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ်အပြုအမူတွေထဲက အယဉ်ကျေးဆုံး (၂၀)ကိုဖော်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ထပ်ဖြည့်ချင်တဲ့ အချက်တွေရှိ ရင်လည်း ဖြည့်သွားကြဗျာ…။
ဒါနဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ်အပြုအမူလေးတွေရော သိချင်ကြသေးလားဗျ…. ဘယ်အချက်တွေသိချင်တယ်ဆိုတာလည်း ပြောခဲ့ကြဦးနော်။
ယောကျြားလေးတှကေို Forever Baby တှလေို့ပွောကွတယျ။ အသကျသာကွီးသှားတယျ ကလေး စိတျမပြောကျသလို၊ အပွုအမူတှကေလညျး ကလေးဆနျကွမွဲပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီလို ကလေး စိတျမပြောကျတဲ့နရောမှာ ကလေးတှလေို ညဈညဈပတျပတျနတေဲ့နရောမှာလညျး သူမတူအောငျပါပဲ။ ဘယျလောကျအသနျ့ကွိုကျပါတယျပွောပွော ဒီအကငျြ့တှကေမကောငျးဘူးဆိုတာသိလို့ မလုပျရငျ သာနမေယျ ညဈတီးညဈပတျနတေတျတဲ့ အပွုအမူတှတေိုငျး မလုပျဖူးတာမရှိသလောကျပါပဲ။ တကယျလို့ ဒီဆောငျးပါးဖတျနတေဲ့သူက မိနျးကလေးဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ အတျောလေးရှံ့ရှာမိ မှာဖွဈသလို ယောကျြားလေးဆိုရငျတော့ ဒီထဲမှာမပါသေးတဲ့ အခကျြတှကေိုပါ ထပျဖွညျ့ခငျြဖွညျ့သှား ကွမယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။
ကဲ ဘယျလို ညဈတီးညဈပတျအပွုအမူတှလေဲဆိုတာ တဈခကျြကွညျ့လိုကျပါဦး။
(၁)အိမျသာထဲထိ ရှူရှူးသှားမပေါကျဘဲ ရခြေိုးခနျထဲမှာတငျပေါကျခွငျး
(၂)လကျသညျးကိုပါးစပျနဲ့ကိုကျခွငျး၊ ပါးစပျနဲ့ကိုကျပွီး လကျသညျးညှိခွငျး
(၄)ဝတျထားတဲ့ဘောငျးဘီကို နောကျတဈကွိမျထပျဝတျလို့ရမရ နှာခေါငျးတရှုံ့ရှုံ့နဲ့အနံ့ခံကွညျ့ခွငျး
(၅)ရိတျထားပွီးသား နှုတျခမျးမှေး၊ မုတျဆိတျမှေးအတိုအစတှကေိုရဆေေးခရြမှာပငျြးခွငျး
(၆)မုတျဆိတျမှေးမှာကပျနတေဲ့ ဗောကျတို့ဖုနျမှုနျ့တို့မကကြအြောငျ မကွာခဏကုတျခခြွငျး
(၇)အိပျခနျးထဲအနှံ့ အဝတျပုံ မပွညျ့မခငျြး မရှငျးခွငျး၊ ခွအေိတျကွိုကျခွငျး (ဘယျလောကျနံနံလြှျော ဖို့မခွေ့ငျး)
(၈)လလေညျပွီး အနံ့ကို လိုလိုလားလားရှူကွညျ့ခွငျး
(၁၀)လမျးသှားရငျး လူမရှိဘူးဆိုရငျ အသံခပျပွငျးပွငျးနှငျ့လလေညျခွငျး
(၁၁)ဓာတျလှကေားထဲမှာလလေညျပွီး ဘယျသူမှမလာအောငျ ဆုတောငျးတတျခွငျး
(၁၂)နှပျခြေးညှဈပွီးရငျ အကြီ င်္လကျနှငျ့အလှယျတကူသုတျခွငျး
(၁၃)ရခြေိုးဖို့လိုမလို ခြိုငျးကို နမျးကွညျ့ခွငျး
(၁၄)ရခြေိုးရမှာပငျြးခွငျး၊ ရမေခြိုးဘဲ အနံ့အသကျပြောကျဆေး(ရမှေေး၊ ခြိုငျးခြှေးနံ့ပြောကျဆေးသာသုံးခွငျး)
(၁၆)ခန်ဓာကိုယျက ခြှေးနံ့ပွငျးပွငျးထှကျနရေငျတောငျ မနံဘူးဟုထငျခွငျး
(၁၇)လကျဆေးရမှာပငျြးခွငျး၊ တဈခုခုကိုငျပွီးတိုငျး ဆေးလဆေ့ေးထမရှိခွငျး
(၁၈)နှာခေါငျးကို ပယျပယျနယျနယျနှိုကျခွငျး၊ နှပျခြေးကိုအရောငျ၊ အနံ့ခှဲခွားလရှေိ့ခွငျး
(၁၉)အိမျသာသှားရမှာပငျြးပွီး ရသေနျ့ဗူးတဲ့ ဆီးသှားခွငျး၊ ဆီးသှားပွီးတိုငျး ရသေနျ့ဗူးကိုလှငျ့ပဈဖို့မခွေ့ငျး
(၂၀) ယောကျြားပီသကွောငျးပွသတဲ့အနနေဲ့ အိမျသာခှကျကိုကြျောပွီး ဆီးသှားခွငျး တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
အခုဖျောပွပေးခဲ့တဲ့အခကျြတှကေတော့ ယောကျြားလေးတှရေဲ့ ညဈတီးညဈပတျအပွုအမူတှထေဲက အယဉျကြေးဆုံး (၂၀)ကိုဖျောပွပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျ ထပျဖွညျ့ခငျြတဲ့ အခကျြတှရှေိ ရငျလညျး ဖွညျ့သှားကွဗြာ…။
ဒါနဲ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ညဈတီးညဈပတျအပွုအမူလေးတှရေော သိခငျြကွသေးလားဗြ…. ဘယျအခကျြတှသေိခငျြတယျဆိုတာလညျး ပွောခဲ့ကွဦးနျော။
ကျန်းမာ​ရေး, ဟာသ, အချစ်​+ရသ